DAAWO: Somaliland oo war kasoo saartay dagaal ka dhacay Xabsiga weyn ee Hargeysa – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Somaliland oo war kasoo saartay dagaal ka dhacay Xabsiga weyn ee Hargeysa
April 13, 2022 Xuseen 2
Iska hor imaan kooban ayaa ku dhexmaray gudaha xabsiga weyn ee Hargeysa, Ciidanka Asluubta Somaliland iyo maxaabiista ku jira xabsiga weyn, oo ku yaalla bartamaha magaalada.
Taliska Ciidanka Asluubta Somaliland ayaa sheegay in Iska hor-imaadka uu yimid kaddib markii ay buuq abuureen qaar kamid ah maxaabiista, Waxaana ku dhaawacmay ilaa dhowr askari oo kamid ah Ciidanka Asluubta, kuwaas oo ay ku dhaceen dhagax ay soo tuureen maxaabiista.
Xabsiga weyn ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa galay saacado jahwareer ah, Ciidanka Asluubta ayaana rasaas u adeegsaday kala eryida maxaabiista, halka Booliska oo deg-deg ku gaaray xabsiga ay xireen waddooyinka soo gala. Sidoo kale, Booliska Somaliland ayaa xabsiga dhigay wariyayaal muuqaalo ka duubay xabsiga.
Hada oo uu hadlayo XABADAA DHACAYA OO LA MAQLAYAA. DHAGEYSO MARKA WARIYAHA WARKA HADALKA DHAMEYNAYO INTAAN TALIYAHA ASLUUBTU QABSAN HADALKA. Wax weyn baa meesha ka dhacay/jira laakiin QARIYA BAY ISLEEYIHIIN. ALLAH HA SAQIRO
Maxamed Nugaal waar iidoorwaxba ma Qarsadaan ba Dadka waa la kala bartaa ma puntland oo af urur shabab weerartay oo dhahayso xero maato iyo shacab baa la laayay baad moodaysaa maatada iyo ilmaha maxaa xeryaha ciidanka dhax dhigay
Iidoor hadii Qof ka dhinto maanta dhan media ha 5 somaliyed Ayaga u haysta 18 ka Gobol ee kale somalia ayaga ka war badan